Hiawatha Academies | Hiawatha Academies Unification Plan
English Video Transcript + −
Spanish Audio Transcript + −
Somali Audio Transcript + −
Kani waa go’aan adag waana mid matalaya isbadal weyn oo ku yimid dhamaan bulshadeena gaar ahaan kooxdeena HLA-Morris Park iyo HCP-Kingfield iyo qoysaskooda. Waxaan ku sharfayaa in mid kasta oo ka mid ah xarumaheena waxbarasho uu leeyahay taariikh, dhaqan, iyo xoogag qayb ka ah sheekadeenna wadajirka ah. Markaan fiirineyno mustaqbalka, waa muhiim inaan keenno waxa ugu fiican cidda aan nahay maadaama aan mideynayno Hal HiawathaAad ayaan ugu mahadnaqayaa xubnaha shaqaalaheena iyo bulshada qoyskeena sida ay ula wadaageen su’aalahaaga iyo faallooyinkaada hogaamiyaasha shabakada iyo Golaha Maamulka maadaama ay ka fiirsanayeen go’aankan. Waxaan ku maqlay faallooyinkaas marin-habaabinta geeddi-socodkan iyo xiriirkeennii hore. Waxaan maqlay baaqa ah in la hagaajiyo kalsoonida iyo hufnaanta shaqada si loo mideeyo xarumaheena hada kadib. Waxaan rabaa inaan ka cudurdaarto jahwareerka iyo niyad jabka howshan keentay. Saameynta waa la dareemay waxaana iga go’an ah inaan kula shaqeyn doono iyadoo shabakadeena ay qaadeyso ficillo la taaban karo si loo horumariyo horay u socodka hada kadib.
Si loo hubiyo in xubin kasta oo ka mid ah bulshadeena hore u socota ay inay heli karto macluumaad iyo cusbooneysiin joogta ah oo ku saabsan Nidaamka Mideynta waxaan sameynay website aad wax badan ka baran karto. Fadlan booqo www.hiawathaacademies.org/unification.
Spanish Translation + −
Somali Translation (coming soon- Jan 16th,12 pm) + −